लकडाउन कडा पार्ने भनेको बाँकेको नेपालगन्जमा यो कस्तो कर्फ्यु ? अघि-अघि जिल्ला प्रशासनको गाडी पछि-पछि सयौंको भिड – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लकडाउन कडा पार्ने भनेको बाँकेको नेपालगन्जमा यो कस्तो कर्फ्यु ? अघि-अघि जिल्ला प्रशासनको गाडी पछि-पछि सयौंको भिड
लकडाउन कडा पार्ने भनेको बाँकेको नेपालगन्जमा यो कस्तो कर्फ्यु ? अघि-अघि जिल्ला प्रशासनको गाडी पछि-पछि सयौंको भिड
नेपालगन्ज । लकडाउनको ४३ औं दिन मंगलबार नेपालगन्जमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । लकडाउन कडाईका साथ पालना नगरिएको भन्दै आलोचना खेपेको जिल्ला प्रशासन बाँकेले आज मंगलवार देखि लागू हुनेगरी कर्फ्यु आदेश जारी गरेको हो । विहान ११ वजेवाट कर्फ्यु लागू हुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गाडीमा माइकिगं गरिएको छ । सो सूचना दिन प्रशासनको गाडी सडकमा आउँदा त्यसको वरीपरी र अगाडी पछाडी सयौंका स्थानिय सडकमै अलमल गर्दै हिडेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ ।
कोही पैदल छन् भने कोही ठेलागाडामा तरकारी बेच्न हिडिरहेको पनि देख्न सकिन्छ । नेपालगन्जमा I थप ७ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ । यो संगै नेपालगन्जमा मात्र कोरोना पुष्टि हुनेको संख्या २३ जना पुगेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कोरोना पुष्टि हुने जिल्ला मध्य बाँके दोस्रो भएको छ । उदयपुरको भुल्केमा २८ जनामा कोरोना देखिएको छ । भारतीय सिमानासंग जोडिएको बाँके कोरोनाका कारण अति जोखिममा छ । तर पनि सर्वसाधारणले त्यसको संवेदनशिलतालाई बुझ्न नसकेको यो भिडियोले प्रष्ट पार्छ ।
आज (मंगलवार) ११ बजेबाट २५ गते बिहिवार मध्यरातसम्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पुरै निषेधित क्षेत्र घोषणा गरि तोकिएका बाहेकलाई घरभित्रै बस्न निर्देश गरिएको छ । नेपालगन्जको धम्बोझीमा बिहान सूचना जारी भइरहेकै बेला पनि लकडाउनको अवस्था यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ । पत्रकार बिजय वर्माले गरेको रिपोर्टमा देखिएको दृश्यले अटेरी अवस्थालाई प्रष्ट पारेको छ ।
सारा विश्वलाई खुशीको खबर : नेपालकै त्रिविका प्रा.डा. ले कोरोना बिरुद्धको औषधि बनाइए
मुना कार्की ह’त्याकाण्ड: छानबिनको सुई तेस्रो पक्षतिर घुम्यो
हवाइ इन्धनको मूल्य घटेसँगै बुद्ध एयरले भाडा घटायो, १ हजारमा पोखरा, १५ सयमा विराटनगर, २ हजारमा नेपालगञ्ज !
दशैंका लागि नयाँ नोट २० दिन अगाडी नै दिने राष्ट्र बैंकको तयारी
‘रवि लामिछाने’ भन्छन् : कि त ओली आफ्नो न्वारान देखिको बल लगाएर सत्तामा टिक्छन, कि त…….